Kuthiwani uma izinso chilled?
Isikhathi esining impela, iqolo ihola ukukholelwa ukuthi unalo izinso chilled. Kodwa lokhu uphawu kungase kubonise nezinye izinkinga eziningi, kufaka phakathi nalezo imisipha ukungezwani. Ukuze uqaphele a izinso abandayo noma kwelinye icala, kufanele ukuba nokuqondisisa kakhudlwana kule ndaba.
Ukuvuvukala izinso libhekene sebuhlungwini obunzima, okuyinto okunzima kakhulu ukubekezelela. Kulokhu isiguli ungakwazi ukuthola ukuma ukhululekile, ngoba ubuhlungu akusho abohle ngisho yindawo evundlile, uhlale bengasenakubekezela. Uma umuntu chilled izinso, ngaphezu izinhlungu nokuphatheka kabi, ke uhlushwa isicanucanu, kukhona reflex Gag, ungakwazi ukwandisa izinga lokushisa komzimba. Noma yimuphi umsebenzi kuphela kuqinisa futhi ahlekise ngakho. Ngezinye izikhathi kukhona izinkinga ne ukuchama. Kuwufanele wazi ukuthi uma umuntu has izinso chilled, izimpawu zenzeka cishe ngokushesha.
Cold ukuhlukanisa kwezinso kungenzeka futhi iqiniso lokuthi ukuwohloka kwenzeka cishe ngokushesha nje ngemva hypothermia. Uma zokugula kwezinso uba ukuhlupheka yezinkinga izifo ezibangelwa amagciwane, nokucekelwa ungase uqale ngemva kwesikhathi esithile isifo. Ngokuvamile isifo sezinso kuwumphumela ukwelashwa ayilungile noma ukukhanya-urinary izinkinga ohlelweni. Ngokwesibonelo, uma uphethwe ezifana cystitis noma kunjalo ayikwazi ukuthatha okugeza, njengoba isicelo ukushisa dilates imithambo yegazi, okuyinto enomthelela Ukungena zokugula izinso.
Ezimweni lingandile zobuhlungu emva kokuwa noma buhlungu uma izibilini balimala. Umqondo wokuthi umuntu chilled izinso kuyinto evamile, kodwa hhayi ngaso sonke isikhathi, njengoba ukudlula ubuhlungu itshe kubuye eqinile.
Ukuze uqinisekise kwangaphambilini uchwepheshe uphethwe cwaningo wegazi kanye nomchamo, kanye ultrasound saziso. Uma umuntu izinso chilled ngempela, ukwelashwa kungase iqondiswa kuphela udokotela-Nephrologist.
Njengoba ibhekwa ukuphathwa eyisisekelo zingasetshenziswa yinoma ngemithi yesintu kuphela ukusheshisa le nqubo zokuphulukisa. Ngokwesibonelo, inani zokupheka ngempumelelo zihlanganisa lezi ezilandelayo: ilitha vodka kudingeka sloe izithelo (100 amagremu) futhi amaqabunga fennel (owodwa isipuni). Izingxenye kukhona okuxubile kahle futhi ibekwe endaweni emnyama amasonto amathathu, ukuba ngezikhathi ezithile ukuze kuqathake ingxube. Nzima ukumnika, sithola isiphuzo, esetshenziswa njengoba ikhambi for zonke izifo nezinso. Lapho izimpawu zokuqala ubuhlungu kufanele baphuze 50 amagremu ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Ngokulinganayo ngempumelelo kubhekwa indlela ukulungiselela edinga amaqabunga umhlonyane (wezipuni ezintathu) futhi willow namagxolo (okufanayo), kanye isigamu ilitha iwayini enezivikelo eziqinile, kuyinto efiselekayo Cahors. Hlanganisa iwayini ngamakhambi kanye sokunika izinsuku ezintathu, bese ufaka enye ingxenye ilitha lamanzi ethafeni wembatha tile. Ngemva ingxube ubiliselwe at ukushisa low zayo umpheki ngisho imizuzu 10. Emva lwaluyophola, ukuhlunga futhi baphuze izikhathi eziningana phakathi nosuku.
amahlamvu Birch abhekwa panacea for izifo eziningi, kuhlanganise izinso. Udinga ukugcwalisa i ibhodlela ezejwayelekile amahlamvu birch, uthele vodka nendawo endaweni emnyama. Kungakapheli namasonto amabili, ingxube ukuthi wafaka bese elicwengekileyo. I ukumnika kwaphumela ingasetshenziswa kokubili izicelo zasendlini kanye ongaphandle. Uma ukuyisebenzisa njengoba ikhambi for ubuhlungu izinso, 50 amagremu yamanzi kudingeka ithisipuni elilodwa tincture. Phuza ngaphambi kokudla futhi akukho izikhathi ezingaphezu kuka-4 ngosuku.
Iyiphi indlela wena okhetha, ukuzinqumela ngokwabo, ngokuvumelana zabo okuthandwa siqu kanye nokuhuheka nezinkanuko. Kodwa khumbula ukuthi akukho amakhambi abantu hhayi kungaba njengoba nomphumela njengoba neqhaza izidakamizwa ukuphulukiswa inqubo medicated. infusions Engamakhambi zinhle njengendlela yokukwenza aphelele.
Izintwala ezinjeni: ukwelashwa liyadingeka ngaphandle kokulibala
Yelaphani ngoba tachycardia: kufanele kube kanjani?
Kungani ngokuhlanganyela sore umlenze?
Snot Brown kusukela yasekhaleni omdala: izimbangela, ukwelashwa. Indlela ugeza ekhaleni lakho ekhaya
Umqambi A. S. Dargomyzhsky: biography, ifa lokudala
Iyini incazelo phraseological "ibhokisi Pandora sika '?
Umlobi Yuri Petukhov: Biography, lokusungula nezithombe
Incazelo umchithi "Quick" (isithombe)
Primer ku ukhonkolo ukusetshenziswa yangaphandle: i Uhlolojikelele, incazelo, uhlobo nezilinganiso. Kwenziwa, Ukungena olujulile ukhonkolo